China F-201346 yakakura inobereka Rexroth A4VG125 pisitoni pombi Vatengesi uye Fekitori | Nzou Fluid Simba
F-201346 ndiyo yekutanga kubereka yeRexroth A4VG125 plunger pombi. Elephant Fluid Power inopa hydraulic plunger pombi mabheyari. Iwo ekutanga mabheyari anowanikwa nemitengo inonzwisisika uye anotumirwa mukati memazuva mashanu.
Chikamu chakakosha chepombi plunger ndicho chinotakura. Kana paine yekutamba mukutakura, iko kwakajeka kubviswa kwematatu maviri ekukwesana maviri mukati meiyo hydraulic pombi haigone kuvimbiswa. Panguva imwecheteyo, iyo hukobvu hweiyo hydrostatic inobereka mafuta firimu yega yega yekukwesana vaviri ichaparadzwa, zvichideredza kushandiswa kwepombi plunger pombi inotakura. hupenyu. Zvinoenderana neruzivo rwunopihwa neiyo hydraulic pombi inogadzira, avhareji hupenyu hwekutakura ndeye 10000h, uye zvinodikanwa kutsiva chiteshi chitsva kana kukosha uku kukapfuura. Bearings yakabviswa haigone kuwanikwa pasina hunyanzvi hwekuyedza michina, uye inogona kungoonekwa nemaziso. Kana kukwenya kana kushanduka kwemavara kuchiwanikwa pane chinotenderera pamusoro, zvinofanirwa kutsiviwa.
Paunenge uchitsiva mabheyari, kutarisisa kunofanirwa kubhadharwa kune echiRungu mavara uye mamodheru emabhero ekutanga. Mazhinji epurunger pombi mabheyaringi anoshandisa hombe mutoro unorema mabhegi. Tenga iyo yepakutanga inogadzira uye yekutanga magadzirirwo. Kana iwe ukatsiva imwe brand, iwe unofanirwa kubvunza kune munhu ane ruzivo nekutakura kuti atarise kumusoro kwetafura nekutsinhana, chinangwa ndechekuchengetedza iwo mwero wehuremu uye mutoro unorema wekutakura.
Axial plunger pombi dzinogona zvakare kushandisa frequency frequency kuti ishandise magetsi emagetsi. Mukugadzirwa chaiko kwemaitiro, axial plunger mapombi anowanzo shandiswa pasi pekumanikidza kana kuyerera kugadzirisa mamiriro ekushanda. Kana iko kumanikidza kwacho kuri kukuru kudarika kumanikidza kunodiwa, kunogadziriswa kuburikidza nevharuvhu yekuchengetedza kuti gadziriro yaro ishande yakasimba uye rega vharuvhu yekuyamura isunungure zvakawandisa. Iyo mota yave ichimhanya izere nekumhanyisa kakawanda, uye simba rekushandisa rinoramba risingachinje.
Ndiro yevhavhavha ine mafomu maviri: kuerera kwendege uye kutenderera kwekupararira. Iyo yekukwesana pairi yechitenderedzwa kuyerera kugoverwa kunogadziriswa nekukuya kana iko kukwenya pamusoro pekuyerera kwekupararira pamusoro peiyi humburumbira kunge isina kudzika: kana iyo groove pane inoyerera yekuparadzira pamusoro peiri humburumbira yakadzika, iyo groove inofanira kuzadzwa ne "pamusoro mainjiniya tekinoroji. "usati wageda Usabaya bofu kudzivirira hutete hwemhangura kubva pakutetepa kana kuvuza kwemafuta kubva pachigadziko chesimbi.
Paunenge uchishandisa kufashukira kugadzirisa kumanikidza uye kuyerera, kumwe kufashukira kunofashukira kudzoka kune yekutanga system, zvichikonzeresa simba risingabatsiri repombi yeplunger uye kushanda kwakaderera kushanda. Kana Chuangjie yekuchengetedza magetsi inverter ichishandiswa, iyo yekufashura vharafu inogona kusetwa Yakavharwa, kuburikidza neyekuchengetedza-inverter inivhu pachayo inogadzirisa iyo yekumanikidza yekumanikidza kuchengetedza kudzikama kwekushanda kwekumanikidza, uye otomatiki anoteedzera kumanikidza kwechigadzirwa. Ziva otomatiki kuzvidzora, nokudaro nekuchengetedza simba rekushandisa. Kubatsira kukuru kweiyi nzira yekugadzirisa ndeyekuti inogona kudzora kushandiswa kwesimba kwesimba reaxial pisitoni pombi, uye simba rekuchengetedza simba rinogona kusvika kupfuura 30%.
Mhoroi, Elephant Fluid Power iboka repamusoro-soro rekusimudzira rine simba rehunyanzvi, richipa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro, mhinduro dzakaperera uye makambani ekutanga eekambani ehunyanzvi kune vashandisi. Iyo kambani inonamatira kune tenet yekumisikidza bhizinesi nekuvimbika, kuchengetedza bhizinesi nemhando yepamusoro, uye kuita fambiro mberi nekufambira mberi. Inoenderera nekukwira misoro mitsva neyakaomarara uye inobatsira kune yenyika otomatiki indasitiri. Gamuchirai vatengi vadiki nevekare kuti vatenge zvigadzirwa zvavanofarira vane chivimbo. Tichakushandira nemoyo wese!
Yepfuura: A2FE160 180 pisitoni pombi kupembedza zvikamu Big Kubereka T7FC070
Zvadaro: 1P40 YOKUTUNGAMIRIRA mavharuvhu CONTROL mavharuvhu 1SPOOL
A2FE160 180 pisitoni pombi kupembedza zvikamu Big Kupa ...